Diyaarad Duuliye La’an ah oo 8 qof ku dishay Pakistaan – SBC
Diyaarad Duuliye La’an ah oo 8 qof ku dishay Pakistaan
Saraakiisha Dowlada Pakistaan ayaa sheegay in 8 qof lagu dilay Xuduuda Wadanka Pakistaan kadib markii gantaal ay ku soo tuurtay Diyaarad Nooca Duuliye la’aanta ah oo ay leedahay Dowlada Mareykanka.
Dowlada Pakistaan Horey ayay duqeymaha Mareykanka uga digtay waxayna ku tilmaantay mid wax u dhimeysa Maamulkooda iyo xoriyadoda iyadoo ku dooday in wax laga weydiiyo marka duqeymo laga geysanayo Dalkeeda.
Bishii tagtay ayaa madaxweynaha Wadanka mareykanka Barack Obama waxaa difaacay weerarada ay diyaaradaha duuliye la’aanta ah ka geystaan deegaanada ay ku xoogan yihiin dagaal yahanada Talibaan eek u yala Pakistaan.
Duqeynta ugu danbeysay ee hatan ayaa waxaa lagu waramayaa in sided ka mid ah Dagaalyahanada Taliban lagu dilay Deegaankaas iyadoo laba kalena dhaawac uu ka soo gaaray sida ay qortay wakaalada wararka ee AFP.
Dowlada Mareykanka oo ay diyaaradaheeda duqeyeen kama hadlin dhacdadan mana faahfaahin khasaaraha ka dhashay marka laga reebo in duqeynta la sheegay inay khasaare soo gaarsiiyay HOgaamiyaal ka tirsan taalibaan.